निमंत्रितहरुलाई गर्न अभिप्रेरित गर्ने समारोह मा नर्सरी कार्ड प्राप्त भोज हल हराएको छैन, र छुट्टी तालिका लागि अवतरण मा ठीक ठाउँमा छान्नुभएको छ। अहिलेसम्म यी कार्डहरू अतिथि, वा भोज भनिन्छ। सामान्यतया, प्रत्येक कार्ड व्यक्तिगत छ र उपकरणहरू नजिकै स्थित छ। यो आफ्नो सबै कल्पना र कल्पना प्रयोग गरेर स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ: एक परिणाम रूपमा छुट्टी तालिका गर्न मूल साथै प्राप्त हुनेछ। यहाँ केही रोचक विचार गर्दै छन्।
एक कोमल र रोमान्टिक शैली पाहुना लागि नर्सरी कार्ड
यो विकल्प सबैभन्दा सफल विवाह हेर्न हुनेछ। हाल को वर्ष मा हल र सामान एक निश्चित रंग मा आकर्षित गर्न बनेको हुनाले रंग र पृष्ठभूमि कार्ड, हल को डिजाइन मेल गर्न अनुकूल गर्न सकिन्छ। तपाईं सजावटी फूल, फूल को दुलही गरेको फूलगुच्छा समान टिप्न र तिनीहरूलाई डिजाइनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चाखलाग्दो कुरा, जब कार्ड आपसमा अलि फरक छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं फरक रंग, पुष्प व्यवस्था र विभिन्न sexes को अतिथि अन्य वस्तुहरू टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कार्ड विशेष हुन सक्छ, तर एउटै शैलीमा गरे, यो हरेक अतिथि गर्न अवसर को विशेष सम्बन्ध नायक जोड हुनेछ। तसर्थ, यो शैली को विशिष्ट विशेषताहरु - कोमल, रोमान्स, फूल, माला र रिबन प्रशस्त।
अतिथि लागि नर्सरी कार्ड प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग
कार्ड छैन आवश्यक कागज बनेको हुन सक्छ। पश्चिम लोकप्रिय मूल निर्णय मा जस्तै कार्डहरू प्रयोग गर्न रूख पात! वृक्ष र Aspen को हरियो पात - शरद ऋतु मा यो गर्मी मा ओक वा मेपल को कास्टिंग, हुन सक्छ। विकल्प धेरै, राम्रो नजर वरिपरि यदि पार्क छन्।
धेरै रोचक अतिथि को नाम तिनीहरूलाई लिखित संग पेबल्स हेर्न हुनेछ।
रोचक कोस्टरस नर्सरी कार्ड
यसलाई स्वाद संग उपस्थित यदि अनावश्यक अतिथि नाम, कागज को एक सामान्य टुक्रा लेखिएको गर्न सकिन्छ। कार्ड अन्तर्गत समर्थन रूपमा, फल वा तरकारी को एक किसिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष रोचक यो गर्मी मा देखिन्छ: उज्ज्वल रसदार र appetizing!
विवाह एक Nautical विषय सजाया छ भने, तपाईंले कोस्टरस गोले रूपमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
हृदय को रूप मा नर्सरी कार्ड
विवाह मा अक्सर अतिथि को नाम संग सानो कागज हृदय देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले आकार मा ठूलो हुन र साधन छेउमा राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले एक निश्चित ठाउँमा थिए भनेर एक "transplanted हृदय", एक मानक रूप मा हुन सक्छ गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईं सानो कागज हृदय यस्तो बिभाजनमा रूपमा उपकरणहरू मा सिधै सम्मिलित जब विकल्प बारे सुनेको छु।
अर्को विकल्प - विशेष व्यञ्जन, अतिथि को नाम लेखिएको छ जो मा। माथिको सुझाव विकल्प भन्दा बढी खर्च हुनेछ, तर यो धेरै प्रभावशाली र मूल हेर्न हुनेछ।
तालिका मा नर्सरी कार्ड - सामान भनेर परीक्षण र आफ्नो सबै कल्पना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। कार्यालय आपूर्ति स्टोर तपाईँले बनाउन आवश्यक छ कि सबै पाउन सक्नुहुन्छ। साथै, यो धेरै छिटो र सजिलै तिनीहरूलाई बनाउँछ। तपाईं हाल आफ्नो हातमा छुट्टी मा एक नर्सरी कार्ड बनाउन निर्णय भने, तिनीहरूले मामला फिट र तिनीहरू हौं पाहुनाहरूको, जानकारी ताकि तिनीहरूलाई कसरी बनाउन, र प्रत्येक अतिथि आफ्नो राम्रो मनोवृत्ति जोड सोच्न। यो प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईंले पक्कै पनि सफल हुनेछ!
मार्च 8 मा छुट्टी को मूल। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको को मूल को संस्करण
नयाँ वर्षको कर्पोरेट जहाँ राम्रो उल्लेख?
ठूलो पैनकेक हप्ताको। Shrovetide को व्यापक मनाउन
फुटबल दिन: खेल कथा र उत्सव को मिति
र के तपाईं गाई वजन कति कत्तिको जान्नुहुन्छ? एक गाय र एक बुल को अधिकतम वजन
कति ककडी मा क्यालोरी?
Crab लाठी: खाना पकाउन के?
जन्मदिन अभिवादन। 55 वर्ष पुरानो बहिनी - महत्त्वपूर्ण मिति!
प्लास्टिक बालकनी ढोका समायोजन गर्न कसरी अवस्थित विधिहरू
रूसी हॉकी खेलाडी Makarov दिमित्री: जीवनी, तथ्याङ्क, सबै भन्दा राम्रो खेल
जिनान अस्पताल Kislovodsk: उपचार र आराम, समीक्षा
दही नुस्खा मा खस्ता दाउरा (रसीला बिस्कुट)